Ihe nkiri kacha mma na-efe efe ikiri n'oge iche iche | Akụkọ akụrụngwa
Miguel Hernandez | | Ihe nkiri na usoro, General, Home
COVID-19 bụ coronavirus na-eme ihe ike, nke mere na ọtụtụ mba dị ka Spain emeela mkpebi siri ike iji mee ihe dị oke mkpa iji belata usoro nje na-egbochi ịgbanye usoro ịgwọ ọrịa karịa. Anyị maara nke ahụ # QuédateEnCasa Ọ karịrị nnọọ hashtag, ọ na-esiri anyị niile ndị na-enwekarị ndụ ike ịnọ ọtụtụ awa n'etiti mgbidi anọ ọbụlagodi mgbe anyị na-arụ ọrụ igwe. Ka ị nwee ike ịnagide COVID-19, anyị na-ewetara gị nhọrọ nke ihe nkiri itoolu gbasara ọrịa na-efe efe nke ga-eme ka ị chee na ọ ga-aka njọ.
1 Agha Zwa Z
2 Nje Virus (Ọrịa)
3 Zombieland: Gbuo ma mechaa
5 Daysbọchị 28 gasịrị / 28 izu mgbe e mesịrị
6 Ọjọọ obibi: Saga zuru ezu
8 Na-efe efe
9 Ihe nkiri Netflix na ọnwa nke ọnwa Machị
Agha Zwa Z
Na-enweghị ihe na-erughị Brad Pitt na Mireille Enos, ụwa na-amalite ịwakpo ndị agha na-anwụ anwụ, mana ihe niile sitere na ọrịa na-efe efe. Gerry Lane, onye ọkachamara n’ịchọpụta ihe maka ndị United Nations, ka enyere ịchọ “ọgwụgwọ” ma ọ bụ opekata mpe ọdachi zuru ụwa ọnụ. Ọ bụ ụzọ mbụ iji chetara gị na ihe niile nwere ike ịka njọ.
Lee Gerra Mundial Z na Netflix: Jikọọ
Ọ dị kpamkpam na Netflix, Sky TV na HBO, ya mere ikwesighi ịchọta oke mgbe ị na-ekiri ihe nkiri a. Ọ bụrụ n’ịgbalị ịgbazite ya, ịnwere ike iji eziokwu ahụ bụ na Rakuten TV na-akwụ ụgwọ € 1,99 na n’ụlọ ahịa ndị ọzọ dịka Google Play Store na Apple TV ha na-efu euro 2,99.
Nje Virus (Ọrịa)
Ihe nkiri 2013 a gbara na South Korea nhazie otu nje bidoro ịgbasawanye na mba Eshia ga-enwe ike ikpochapụ ndị o metụtara naanị awa 36 ka ha rụsịrị ọrụ n'ahụ. A na-ebute nje a site na ikuku n'ihi ya ọ bụ ihe egwu dị nso.
Can nwere ike ịhụ ya kpamkpam na Netflix ma na-ewe ihe karịrị awa abụọ. Ọ bụ ihe nkiri na-egosi myirịta pụrụ iche na ọnọdụ ugbu a, ya mere ọ nwere ike imerụ uche.
Zombieland: Gbuo ma mechaa
Obere ọchị, nke na-egwu egwu. Ihe nkiri Zombieland nke abụọ anyị hụrụ Woody Harrelson na Emma Stone n'etiti ndị ọzọ. N'ime usoro a, ọ bụ oge iji gaa n'ihu njem site na United States of America ma chee ihu na ndị na-anwụ anwụ ịchọ ọgwụgwọ.
Ihe nkiri a dị na Movistar + na Vodafone TV kpam kpam n'efu ma ọ bụrụ na ị debanyere aha ha na ọrụ telivishọn ha. Ọ na-ewe ihe karịrị otu awa na ọkara ma ọ bụ ụzọ dị egwu iji nwee ọchị n'oge ndị a siri ike.
Otu n'ime mmemme Arnold Schwarzenegger kachasị ọhụrụ, na ihe nkiri a nje dị ize ndụ na-agbasa gburugburu ụwa ma ọ dị ka ọ nweghị oke. Maggie bụ afọ iri na isii dị afọ iri na ụma bu oria a, ihe nkiri a gwara anyị etu nna ya siri gbalịa igbochi ya ka ọ ghara ịnwụ.
Ihe nkiri a dị na Google Play si euro 1,99 na Rakuten TV site na 3,99 euro n'etiti nyiwe ndị ọzọ. Akụkọ dị egwu nke ndị nkatọ na-anabataghị nke ọma na nke nwere ọtụtụ CGI iji kwụsị anyị.
Daysbọchị 28 gasịrị / 28 izu mgbe e mesịrị
Site na echiche m otu sagas kacha mma banyere pests na zombies anyị nwere ike ịchọta na sinima. Ha kara akara tupu na mgbe ha siri kọọ akụkọ ahụ, na-ahapụrụ akụkọ sayensị iji chetara anyị na ihe ndị dị otu a nwere ike ime, anyị kwesiri ịdị njikere.
Ihe nkiri abụọ a dị na Sky TV na Vodafone TV kpamkpam na kpamkpam. Ha abụghị nke ohuru, site na 2002 na 2007 kpọmkwem, yabụ anaghị m achịkwa na ha dị na nyiwe ụfọdụ dịka YouTube dịka ọmụmaatụ, jiri obi ụtọ na-ekpori ndụ, ha nwere ike ime ka ntutu gị kwụrụ na njedebe.
Ọjọọ obibi: Saga zuru ezu
Omuma di n'etiti ndi ochie apughi efu, O nweela usoro egwuregwu vidiyo ya (nke bụ isi na nke ọma), ihe nkiri na ihe niile ị nwere ike iche. Anyị nwere usoro ihe nkiri dị na nyiwe ụfọdụ, mana ọ bụghị na ndị ọzọ, ọ bụ ya mere anyị ji achịkọta gị ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịme marathon Resident Evil:
Resident Evil: Naanị ịzụta na A3Player na ndị ọzọ.
Bi Ọjọọ 2 - Apọkalips: Naanị ịgbazite na Rakuten TV, A3Player na ndị ọzọ.
Onye ọjọ 3 - mkpochapu: Naanị ịgbazite na Rakuten TV, A3Player na ndị ọzọ.
Onye Ọjọọ 4 - Ndụ Mgbe A Nwụsịrị: Odikwa n'efu na Netflix na ịgbazite na nyiwe ndị ọzọ.
Onye ọjọ 5 - Imegwara: Dị na mgbazinye na Rakuten TV, A3Player na ndị ọzọ.
Onye Ọjọọ 6 - Isi Ikpeazụ: Odikwa n'efu na HBO.
Ihe nkiri 2017 a nke Martin Freeman na-akpọga anyị a post-apocalyptic ụwa mgbe ihe otiti nke nje na-eme ka ndị mmadụ ghọọ zombies. Nanị ebumnuche onye protagonist bụ ịzọpụta nwa ya nwanyị, ọnwa ole na ole, tupu ọ bụrụ onye na-anwụ anwụ dị ka ndị ọzọ.
Ihe nkiri na-ewe ihe karịrị otu elekere na ọkara ma dị na Netflix kpam kpam n'efu.
Ihe nkiri a 2011 ebe ha na-enwu Marion Cotillard na Matt Damon, na-akọ banyere ihe ndị dị ize ndụ nke nje virus na-egbu egbu bụ́ nke gbasara n’ụwa nile. Fewbọchị ole na ole nje ahụ na-ebelata ọnụ ọgụgụ ndị mmadụ ọ bụkwa na ọ bụ naanị mmekọrịta dị n’etiti ụmụ mmadụ na-ebute ihe na-efe efe.
Ego ole bụ echiche ziri ezi, yana obere mmetụta pụrụ iche na ikekwe otu n’ime ihe ndị ọzọ kachasị mma anyị nwere ike ịhụ ma ọ bụrụ na anyị achọ ịdị irè ma nweta echiche doro anya, na-ebukwa n’uche na ọ bụ ihe nkiri na ọ bụghị eziokwu zuru oke. Maka ugbu a ọ bụ naanị maka ịgbazite na Rakuten TV, Apple TV na Google Play.
Ihe nkiri Netflix na ọnwa nke ọnwa Machị
Ọ bụrụ na ị na-achọ karịa ma ọ bụ na ị gafere ụdị "ọrịa" a, ndị a bụ Netflix premieres na March:
Princess Mononoke - site na March 1
Akụkọ banyere Princess Kayuga
Nausicaa nke Ndagwurugwu Ifufe
Arrietty na ụwa nke obere
Ndị agbata obi m Yamada
Nloghachi nke pusi
Nkịtị nke White City - March 6
Sitara: Ka Girlsmụ agbọghọ Na-arọ nrọ na Ikpeazụ - March 8
Girlsmụ agbọghọ efu efu - March 13
Oghere - March 20
Fangio, nwoke nke na-azụ igwe
--Lọ - March 25
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Ihe nkiri kacha mma na-efe efe ikiri n'oge iche iche
Nweta ego iji nagide Coronavirus kwarantaini